Fampihorohoroana : Nisy nanipy grenady indray ny Total Tsiazotafo
Intelo amin’izao no nisy nisompatra ny toby fizarana solika Total eny Tsiazotafo. Omaly tamin’ny 1 ora sy sasany antoandro dia grenady indray no nisy nanipy teo amin’io tobin-tsolika io.
Na misy fitaovana fanaraha-maso manokana na « caméra de surveillance » aza ny toerana dia takona izany no nanipazana ilay grenady.
« Karazana grenady « offensive », vita sovietika, natao hamonoana no nampiasaina teto », hoy ny jeneraly Ravalomanana Richard, tonga teny an-toerana niaraka tami’ny kaomisera divizionera Rakotondrainivonona Marcaire, talen’ny polisy misahana ny faritan’Antananarivo.
Ny polisy na ny zandarimaria no manana grenady tahaka an’io, raha ny fanamarihan’ny tompon’andraikitra.
Teo am-pidirana ny toerana fanoloana menaka no nipoahan’ity fitaovam-piadiana mahery vaika ity. Nanapotika zavatra maromaro teo amin’io toby io izany. Vaky ohatra ny fitaratra sy entana maromaro. Rakotra lavadavaka ny rindrina voarakotra « carreaux » ao amin’ny toerana fanoloana menaka sy fanasana fiara.
Feno lavadavaka hatrany ambadika ihany koa ny takelaby roa sosona misy ny toerana fametrahana vidin-tsolika. Feno lavdadaka hatramin’ny tafo miaro ny paompy fizarana solika. Tetsy andaniny dia vaky ny fitaratry ny fiara 405 iray, nijanona teny ampitan’ity tobintsolika ity.
Raha ny voalaza aza dia nisy tovolahy iray naratra, nitolefika, toa voan-javatra nipitika, fa saingy nanohy ny diany ihany.
Olona iray nanatri-maso no nilaza fa « nisy olona niantsoantso fa hanapoaka zavatra ».
« Sendra nanasa tanana tetsy amin’ny ilany andrefana tetsy aho sy ny namako fa handeha hisakafo no nipoaka ilay izy.
Nambaran’ny olona tery ampita fa nisy lehilahy iray nandositra niakatra ny tohatoha-bato raha vao nirefotra ilay grenady », hoy Randrianarimanana Lovaniaina, mpiasa ao amin’ity toby Total ity.